Fahombiazan'ny mpianatra, amin'ny isa »University of Hodges
Famantarana ny zava-bitan'ny mpianatra sy ny fampisehoana andrana
Ny fahombiazan'ny mpianatra amin'ny fanatrarana tanjona kendrena manokana na matihanina no iraka lehibe indrindra ao amin'ny Hodges University. Ny oniversite dia mandrefy ny zava-bitan'ny mpianatra sy ny fahombiazan'ny andrim-panjakana amin'ny lafiny maro, ao anatin'izany ny tahan'ny asa / asa fametrahana ny mpianatra, ny fahombiazan'ny diplaoma, ny fitazonana ny mpianatra ary ny fikirizany, ny tahan'ny diplaoma ary ny haavon'ny trosan'ny mpianatra.
Taham-pitanana mpianatra isan-taona
Ny tahan'ny fitanana isan-taona dia nofaritana ho ny isan-jaton'ny mpianatra mitady diplaoma nisoratra anarana tamin'ny vanim-potoanan'ny fararano izay mbola nisoratra anarana tamin'ny vanim-potoana latsaka manaraka. Ny tahan'ny fitanana isan-taona dia isaina ho an'ny voalohany amin'ny Hodges sy ny mpianatra misoratra anarana rehetra. Ny tahan'ny fihazonana ho an'ny mpianatra bakalorea dia voalaza etsy ambany. Ny tanjona napetraky ny Oniversiten'i Hodges dia miovaova arakaraka ny vondron'olona, ​​miaraka amin'ny 40% voalohany ao Hodges ary 60% ho an'ny mpianatra rehetra misoratra anarana.
RATSY 2012 - 2013
RATSY 2013 - 2014
RATSY 2014 - 2015
RATSY 2015 - 2016
RATSY 2016 - 2017
RATSY 2017 - 2018
RATSY 2018 - 2019
RATSY 2019 - 2020
Fe-potoana voalohany ao Hodges
licence 55% 52% 55% 55% 45% 50% 40% 45%
Mpianatra voasoratra anarana rehetra
licence 65% 63% 65% 69% 61% 63% 68% 63%
Ny tahan'ny fikirizana hatramin'ny ririnina amin'ny zava-bitan'ny mpianatra
Matetika ny mpianatra dia mitatitra fa ny fotoam-piasan'izy ireo voalohany amin'ny oniversite no tena sarotra indrindra, indrindra ho an'ireo izay miverina mianatra taorian'ny fotoana tsy nahitana fotoana maharitra, izay miasa manontolo andro, ary izay mamelona fianakaviana. Ny University of Hodges dia manatratra ireo mpianatra manana serivisy natao hanampiana azy ireo hahomby - indrindra mandritra io fe-potoana voalohany fitsikerana io.
Ny tahan'ny maharitra maharitra dia faritana ho isan-jaton'ny mpianatra mitady diplaoma voasoratra anarana amin'ny vanim-potoana fararano izay mbola voasoratra anarana amin'ny vanim-potoana ririnina manaraka. Ny tahan'ny faharetana maharitra dia isaina ho an'ny fotoana voalohany ao Hodges sy ireo mpianatra voasoratra anarana rehetra.
Ireto ambany ireto ny tahan'ny faharetana maharitra ho an'ny mpianatra mitady diplaoma rehetra; ny tena freshmen (voalohany tany amin'ny oniversite); ary ireo mpianatra tranainy, miaraka amin'ny antokon'olona tsirairay avy na mihoatra ny tanjon'ny 50% an'ny Hodges University voalohany tao Hodges ary lasibatra 70% ho an'ireo mpianatra nisoratra anarana rehetra. Mampiseho ny angon-drakitra fa ny ankamaroan'ny mpianatra dia nahomby tamin'ny fe-potoam-piasan'izy ireo voalohany ary niditra an-tsokosoko indray tao amin'ny Hodges University ho an'ny fe-potoam-piasan'izy ireo faharoa tao amin'ny oniversite.
INDRINDRA VOALOHANY TAO HODGES COHORT
RATSY 2012 -WINTER 2013
RATSY 2013 -WINTER 2014
RATSY 2014 -WINTER 2015
RATSY 2015 -WINTER 2016
RATSY 2016 -WINTER 2017
RATSY 2017 -WINTER 2018
RATSY 2018 -WINTER 2019
RATSY 2019 -WINTER 2020
RATSY 2020 -WINTER 2021
Mpianatra mitady diplaoma 70% 71% 75% 70% 67% 71% 58% 60% 74%
Tena freshmen 71% 74% 77% 61% 66% 72% 53% 51% 70%
COHORT FAMPIANARANA REHETRA REHETRA
Hianjera 2019 -WINTER 2020 *
Mpianatra mitady diplaoma 75% 77% 76% 78% 75% 76% 76% 65% * 76%
Mpianatra veterana 73% 78% 72% 83% 78% 79% 84% 72% * 84%
* NAOTY: Nisavoritaka io fe-potoana io noho ny fanidiana ny sekoly tsy maharitra noho ny areti-mifindra SARS-COV-2.
Ny statistika ivelany dia ampiasaina hanamarinana ny statistikan'ny asa ao anatiny. Ny loharanom-pahalalana ampiasaina dia ny Fampahalalana momba ny fampianarana sy ny fampiofanana Florida (FETPIP), izay manangona angona momba ny andrim-panjakana Independent Colleges & Universities of Florida (ICUF). Ao amin'ny tahirin-kevitra navoaka farany indrindra, ambony ny University Hodges raha oharina amin'ireo mpiara-mianatra aminy ICUF, miaraka amin'ireo mpianatra Hodges no mitana ny laharana dimy voalohany ho an'ny karama isan-taona ho an'ireo nahazo diplaoma bakalorea niasa teo anelanelan'ny 2011 sy 2019. Tanjon'ny Hodges University ho an'ireo mpianatra notaterin'ny FETPIP izay nahazo mari-pahaizana bakalorea ary izay miasa dia 65%.
ISAN'NY GRADUATE BACHELOR
PERSENTIN'NY GRADUATE BACHELOR NASAINA
MITADIAVA VOLA AMIN'NY TAOM-PAHASALAMANA HO AN'NY GRADUATE BACHELOR
NY RANO EO AMIN'NY OLON'NY ICUF
Famokarana mari-pahaizana amin'ny zava-bitan'ny mpianatra
Noho ny fahasahiranana amin'ny fampitahana ny tahan'ny fizarana diplaoma amin'ny andrim-panjakana maro samihafa, fepetra iray mahomby amin'ny fandraisana andraikitra ampiasain'ny Hodges University hanehoana ny zava-bitan'ny mpianatra ny fahombiazan'ny diplaoma. Ny famokarana diplaoma dia fanehoana ny isan'ny diplaoma nomena tamin'ny taom-pianarana ho isan'ny isan-jaton'ny fisoratana anarana mitovy (FTE) amin'ny fotoana feno araka ny nitaterana ny rafitry ny angon-drakitra momba ny fanabeazana (IPEDS). Noho izany, ny famokarana diplaoma dia taratry ny zava-bitan'ny mpianatra amin'ny ankapobeny, fa tsy ho an'ny ampahany kely amin'ny vatan'ny mpianatry ny oniversite, ary manome refy mahomby amin'ny zava-bita maro. Na dia niaina isan'ny fisoratana anarana ambany kokoa aza i Hodges tato anatin'ny taona vitsivitsy, ny tabilao dia mampiseho fahombiazana tsy tapaka amin'ny famokarana diplaoma, miaraka amin'ny diplaoma 29 nomena isaky ny 100 FTE tamin'ny 2019-2020, mihoatra ny tanjona 25 degre isaky ny 100 FTE.
Ny tahan'ny fizarana diplaoma dia navoakan'ny Integrated Postecondary Education Data System (IPEDS) ho an'ny governemanta federaly. Ireo sanda ireo dia maneho ny isan-jaton'ny mpianatra maharitra, mitady diplaoma ho an'ny mpianatra voalohany nisoratra anarana voalohany tao amin'ny oniversite (freshmen) izay nahazo diplaoma tao anatin'ny 150% ny fotoana nandrasana hahavita ny diplaoman'izy ireo.
Ny antokon'olona ampiasaina mba hikajiana ny tahan'ny fizarana diplaoma IPEDS dia tsy maneho marina ireo mpianatra Hodges, izay olon-dehibe indrindra miasa sy mamelona ankohonana; ary noho izany, matetika izy ireo dia manatrika tapa-potoana ary efa manana mari-pahaizana amin'ny oniversite. Tamin'ny fararano 2020, 33 taona ny salan'isan'ny mpianatr'i Hodges ary 34% ny mpianatra nitady diplaoma nanatrika fotoana fohy.
Noho izany, mba hanomezana angon-drakitra manamarina, Hodges dia manisa ny tahan'ny fizarana diplaoma amin'ny 150 isan-jaton'ny fotoanan'ny diplaoma mahazatra ho an'ireo mpianatra bakalorea ao amin'ny vondrona mpandray anjara amin'ny fararano izay manatrika an'i Hodges voalohany. Ny tahan'ny fizarana diplaoma amin'ny 150 isan-jato amin'ny fotoana voalohany ao amin'ny Hodges undergraduate, mpianatra mitady diplaoma dia omena etsy ambany. (Ity dia maneho ny tena mpiara-mianatra vao tena izy sy ny cohort transfer-in.) Ho fanampin'izany, ny tahan'ny fizarana diplaoma amin'ny 150 isan-jato dia aseho ho an'ny cohort transfer-in, izay maneho ny 70% amin'ny fotoana voalohany tao amin'ny cohort Hodges. Mifanohitra amin'izany, ny tahan'ny fizarana diplaoman'ny IPEDS amin'ny ankapobeny dia omena mba hampisehoana ny antokon'olona freshmen tena marina raha ny tatitra ofisialy.
Miorina amin'ny angon-drakitra fironana manomboka amin'ny fararano 2007 ka hatramin'ny fararano 2014, ny tanjon'ny Hodges University ho an'ny tahan'ny diplaoma anatiny 150 isan-jato amin'ny fotoana ara-dalàna hatramin'ny farany dia 30%.
Ny vidin'ny GRADUATION INTERNAL amin'ny 150%
Mpianatra mitady diplaoma bakalorea Fall 2007 Fall 2008 Fall 2009 Fall 2010 Fall 2011 Fall 2012 Fall 2013 Fall 2014
Fotoana voalohany ao amin'ny Hodges Cohort 40% 44% 30% 30% 30% 31% 27% 33%
Cohort famindrana 51% 54% 36% 35% 35% 38% 33% 42%
Ny vidin'ny IPEDS amin'ny ankapobeny 150%
Salanisan'ny mari-pahaizana IPEDS amin'ny ankapobeny 30% 29% 30% 25% 27% 22% 26% 28%
Fepetra azo avy amin'ny IPEDS amin'ny zava-bitan'ny mpianatra
Mba hisolo tena ny oniversite Hodges, ny faran'ny vokatra IPEDS vaovao dia nosafidiana vao tsy ela ho toy ny famantarana famaranana SACSCOC. Na dia taona vitsivitsy monja aza no nanangonana io fepetra io (miaraka amin'ny farany indrindra tamin'ny taona 2020-2021 ho an'ny vondron'olona 2012), ny fandalinana ny fironana ifotony dia mampiseho fa, miaraka amin'ny fampidirana ireo mpianatra mifindra toerana sy tapa-potoana, izay marimarina kokoa misambotra ireo olon-dehibe miasa miverina mianatra, ny tahan'ny valisoa 8 taona dia tafiditra ao anatin'ny lasibatra napetrakay 30%.
FOMBAHARANA MOMBA NY IPEDS (RATE AWARD 8-TAONA)
Mpianatra mitady diplaoma bakalorea 2007 Cohort 2008 Cohort 2009 Cohort 2010 Cohort 2011 Cohort 2012 Cohort
Mandritra ny fotoana feno, miditra voalohany 30% 29% 29% 23% 26% 26%
Sambany, fidirana voalohany 35% 22% 24% 34% 35% 27%
Fidirana amin'ny fotoana feno, tsy voalohany 56% 59% 44% 42% 42% 38%
Sambany, fidirana tsy sambany 44% 35% 29% 31% 24% 32%
Taham-pahafahana ankapobeny 45.9% 45.6% 35.6% 32.5% 31.8% 30.8%